ConvertXtoDVD maka Mac? Tọghata ihe ọ bụla iji DVD on Mac d
> Resource> DVD> ConvertXtoDVD maka Mac? Tọghata ihe ọ bụla iji DVD na Mac
ConvertXtoDVD maka Mac? Tọghata ihe ọ bụla iji DVD na Mac
Ọ bụrụ na ị bụ onye na kọmputa geek, ị pụghị nna niile video formats na metụtara ihe ọmụma. N'ezie, ị na-adịghị na. Isiokwu a ga-eleghara niile video format ihe na-egosi gị otú tọghata X ka DVD na DVD Creator software. Mgbe converted X ka DVD, ị na-ekiri vidio na TV na ihe ọ bụla nkịtị DVD ọkpụkpọ dị ka dị ka Philip, Sony, Ọsụ Ụzọ, Samsung, Asus, LG, Benq, OVK, wdg
Cheta na: ConvertXtoDVD bụ a DVD-ere ọkụ software ngwa mepụtara VSO Software ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, ConvertXtoDVD adịghị hapụ a Mac version. Ị nwere ike nweta a ConvertXtoDVD ọzọ maka Mac ebe a (Mountain Odum, odum akwado). Gaa VSO Software si website ibudata ConvertXtoDVD maka Windows, ma ọ bụ download ọzọ (Mountain odum akwado) ebe a.
ConvertXtoDVD Alternative maka Mac:
The convertXtoDVD software maka Mac-enyere gị aka ọkụ ọ bụla vidiyo na DVD na a ahaziri DVD menu. Ị pụrụ ọbụna itinye foto ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Na X ka DVD Ntụgharị maka Mac (Mountain Odum, odum gụnyere), na X anọchi:
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ iji tọghata X ka DVD na Mac. Mgbe ọkụ X ka DVD na Windows, nzọụkwụ ndị yiri (tinye, dezie, ọkụ), ma jide n'aka na ị ga-esi na X ka DVD burner maka Windows mbụ.
Easy Nzọụkwụ iji tọghata X ka DVD na Mac
Nzọụkwụ 1: Tinye X videos. Ihe niile na-Mac ọrụ, download X ka DVD Ntụgharị maka Mac na ịwụnye. Mgbe ọ bụ na-emeghe, pịa "Mepụta a New Project". Ke isi interface, pịa "+" ihe ịrịba ama ka ịgbakwunye X faịlụ na ị chọrọ iji tọghata, ị nwere ike mbubata ihe karịrị otu faịlụ n'otu oge site na-ejide "akara" ma ọ bụ "iwu" isi mgbe ahọpụta faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Dezie DVD ọcha. Na ekpe panel, ị nwere ike hazie videos, dezie videos na-ede akwụkwọ a mara mma DVD menu n'ihi na gị X DVD. Ka ịmepụta a DVD menu, ịgbanwee gaa na NchNhr panel na họrọ a preset menu template na-amalite customizing eku ịke, button ịke, menu ederede na ndị ọzọ. Video edezi agụnye: akuku video size, ewepụtụ video n'ogologo, bugharia na ịtọ pụrụ iche utịp.
Nzọụkwụ 3: Ọkụ X ka DVD na menu. Mgbe ihe niile bụ ihe OK, fanye a Odide ike DVD ụgbọala, wee pịa "Ọkụ" button ime ka ikpeazụ ntọala na-amalite converting X ka DVD na Mac. Ebe ị nwekwara ike tọghata X ka DVD nchekwa, .dvdmedia na ISO faịlụ dị ka a na-ahọrọ.
Mgbe X ka DVD ede zuru ezu, DVD diski ga idaputa na-akpaghị aka mere na ị pụrụ ozugbo fanye n'ime nkịtị DVD ọkpụkpọ na-enwe vidiyo na TV.
Atụmatụ: The diski ohere Ama na-egosi na ala. Ị nwere ike họrọ diski ụdị n'etiti "DVD5" na "DVD9" (4.5G na 9.0G) na video àgwà dị ka "Best Performance", "High Quality" ma ọ bụ "Ọkọlọtọ".
Ọzọkwa, ị pụrụ izo aka a video nkuzi:
Tọghata X ka DVD maka Windows:
Na Windows X ka DVD Ntụgharị, ndị X anọchi: SD Video Formats: WMV, AVI, FLV, MP4, M4V, MOV, mpg, MPEG, 3GP, 3G2, VOB, DAT, ASF, MOD, Tod, RM, RMVB, DV, aku, DVR-MS HD Video Formats: HD AVI (VC-1, MPEG-4), MTS / M2TS / TS / TP / TRP (AVHD H.264, VC-1, MPEG-2 HD), HD WMV (VC-1, WMV HD), HD MKV (H.264), HD MOV (H.264), HD mpg (MPEG-2 HD), HD MP4 (H.264, XviD)
>> Lee ihe zuru ezu iji tọghata X ka DVD maka Windows
Olee otú iji tọghata M4V ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú iji tọghata na Ọkụ MKV ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú ịchọta rapidshare na tọghata rapidshare Movies ka DVD
Olee Ụdị Formats Ọ a DVD Player Nkwado?
Windows DVD Onye kere - akwado File Formats
Olee otú Ọkụ iPhoto ngosi mmịfe ka DVD na Mac (Yosemite gụnyere)
DV ka DVD burner: Olee otú iji tọghata MiniDV / DV ka DVD
Download iDVD maka Windows 8/7 / Vista / XP Ọkụ DVD on PC
iDVD AVI - Olee otú iji tọghata AVI ka iDVD ma ọ bụ DVD na Mac
Olee otú iji tọghata MP4 ka a DVD Player
DVD draịva: Họrọ otu Internal ma ọ bụ mpụga DVD Drive?